विचार Archives - Page 38 of 41 - चौतारी पोष्ट अनलाइन
‘स्वर्ग’ जाने ‘नरक’को बाटो
(सन्दर्भ वली–दाहाल समूहको राजनीतिक प्रतिवेदन) - अनिल शर्मा ‘विरही’ जगतलाई प्रस्ट भएको कुरा हो– एमाले पाँचौँ महाधिवेशन तथा बहुदलीय जनवादरूपी दलाल पुँजीवादी विचार र त्यही .अनुरूपको राजनीतिमा टेकेर उभिएकै थियो र छ । त्यही राजनीतिक–वैचारिक लाइनमा प्रचण्डको पतन भएको छ । विप्लव–किरणको विद्रोहपछि गएको संविधानसभाको चुनावमा ठूलो धक्का खाएको, त्यसको विपल्पका रूपमा काङ्ग्रेससँगको सहकार्य छोरीलाई मेयर बनाउन बाहेक कामकाजी नभएको र बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनपछि अस्तित्वरक्षाको खोजीका क्रममा प्रचण्डको वली समूहमा विसर्जन भएको हो । सारतत्व यो हो भने रूप पक्षबाट हेर्दा ‘एकता’ भनिएको छ । २०७५ जेठ ३ गते पारित र १ वर्षपछि प्रकाशित राजनीतिक प्रतिवेदनले त्यही सारतत्व अभिव्यक्त गरेको छ । कम्युनिस्ट र समाजवादको नारा भट्ट्याउँदै जनता झुक्याउनु र पँजीवादको सेवा गर्नु खोटा कम्युनिस्टहरूको अनैतिक कर्म हो । राजनी
सन्दर्भ: ४०औं विश्व पर्यटन दिवस: पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको अवस्था
विश्वनाथ खरेल हरेक वर्षको सेप्टेम्बर २७ अर्थात् आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस मनाइन्छ। पर्यटन वास्तवमा संसारको सबैभन्दा ठूलो उद्योग अर्थात् अर्थ जम्मा गर्ने प्रमुख स्रोत पनि हो। यसर्थ विश्वभरिकै पर्यटक संख्या एक अर्बमात्र भर्खरै पुगेको अनुमान गरिएको छ। देशमा आउने पर्यटकको संख्यामा मात्र वृद्धि गरिएर हुँदैन। उनीहरूको संख्याको साथै खर्चमा वृद्धि गर्ने वातावरण नबढेसम्म पर्यटक आगमनले मात्र आर्थिक लाभ प्राप्त हुन सक्दैन। देशमा के–कसरी बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने भन्ने विषयमा नीति निर्मातादेखि पर्यटन व्यवसायीहरूको ध्यान जानुपर्छ। हाम्रो देशमा भने वार्षिक ११ लाखभन्दा बढी पर्यटकहरू आइरहेका छन्। त्यसलाई बढाएर आउँदो वर्ष २० लाख पुर्याउने भनेर हामीले विभिन्न भ्रमण वर्षको आयोजना गरिरहेका छौं तर लक्ष्यअनुसार पूरा हुन सकेको छैन। यसै गरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि भ
‘दया र प्रेम शब्दमा छोटो होला तर, यसको ध्वनी अनन्त हुन्छ’
मदर टेरेसाको जन्म २६ अगस्ट, १९१० का दिन अग्नेसे गोंकशे बोजशियुको नामबाट एक अल्बेनीयाई परिवारमा उस्कुब, मेसेडोनिया गणराज्यमा भएको थियो। उनले १९५० मा कोलकातामा मिशनरीज अफ च्यारिटीको स्थापना गरिन्। ४५ वर्षसम्म उनले गरीब, बिरामी र अनाथहरुका लागि काम गरिन्।१९७० सम्म उनी गरीबहरू र असहायहरूका लागि आफ्नो मानवीय कार्यहरूका लागि प्रसिद्द भइन्। माल्कोम मुगेरिजको थुप्रै वृत्तचित्र र पुस्तक जस्तो समथिंग ब्यूटीफुल फर गोडमा यसको उल्लेख गरियो। उनलाई १९७९ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार र १९८० मा भारतको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान गरियो। टेरेसाको निधन ५ सेप्टेम्बर, १९९७ का दिन भयो। टेरेसाका महत्वपूर्ण भनाइ मानिस मृत्युपश्चात् स्वर्ग पुग्ने श्वरैकल्पनामा हुन्छ। तर, लामो जीवनमा गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे भने सोच्दैन। तर, मदर टेरेसाको भने मृत्युपछि स्वर्ग जाने चाहना थिएन। उनी धर्तीमै स्वर्ग देख्न चाहन्थिन
सिस्ने हिमाल र सुखानीलाई एक पटक संझे पनि हुन्छ !
Posted in मूल खबर, विचार
जब हामी कसैको घरमा जान्छौँ भने त्यहाँ ढोका लगाएको रहेछ भने हामीले भित्रका कसैलाई संकेत गरेपछि खिड्की खुल्छ र जब त्यो ढोकाको खिड्की खुस्कन्छ ढोका भनौँ या दैलो खुल्छ वा उघ्रन्छ भने त्यो कोठा भित्रको प्राय सबै दृश्य देखिन्छ । मैले यो लेखको प्रारम्भमानै यो साधारण उदाहरण यसर्थ दिएको हुँ कि कुनै कुरो देखिन वा हेर्नका लागि केही समय लाग्छ र क्रमश त्यसको एउटा चरण पारगरे पछि हेर्न वा देखिनका लागि धेरै थोक भेटिन्छ । यो प्रसङ्गमा आज मैले नेपालका कम्युनिष्ट भन्नेहरुको छोटो विगत र वर्तमानको चित्र हेर्न र हेराउन मन लागेको छ । प्राय नेपाली जनता कम्युनिष्ट भन्नेहरु सँग कित त उनीहरुले गाउने गीतले कि त उनीहरुका गुलिया सपनाको खेती गर्ने मुलायम पनि र उग्र भाषण सुनेर कम्युुनिष्ट भन्नेहरुलाई साथ , सहयोग र समर्थन गर्न पुगेका हुन् । केही मान्छेहरु आफुले माक्र्स, लेनिन, माओ, स्टालिन, एन्गेल्स लगायतका शास्त्रको अध्
प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध ‘प्रायोजित प्रोपोगान्डा’ !
-रमेश खड्का समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको स्वप्नद्रष्टा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सम्हालेपश्चात सुरक्षा र बिकासलाई सँगसँगै डोहोर्योउने सारथीको रुपमा २०७४ साल चैत्र २९ गते नेपाल सरकारद्वारा नेपाल प्रहरी संगठनको रिक्त पदमा सर्वेन्द्र खनाललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरिएको यथार्थ कसैको सामु लुकेको छैन । उक्त नियुक्तिमा उनले बिभिन्न स्थानमा रहँदा अति उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको यथार्थताले काम गरेको तथ्य पनि हामीसामु घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । जस्तो कि फुटवल म्याच फिक्सिङको घटना होस वा पेट्रोलियम सप्लाईलाई अनियमितता गरेका सरकारी कर्मचारी हुन वा नामुद गुण्डागर्दीमा संलग्न घैटे कुमार जस्ता ब्यक्ति नै किन नहुन, उनले काडो झिके झैं झिकी समाजलाई र नेपाल आमालाई गुण लगाएको त हामी कसैको सामु छिपेको छैन। त्यस्तै प्रकारले बिभिन्न आन्दोलनको क्रममा काठमाडांैको फिल्डमा खटिई बिना कुनै क्
- अनुवाद : भेषराज भुसाल सापेक्षित अतिरिक्त जनसंख्या पुँजी संचयको अपरिहार्य परिणाम हो पुँजीका अवयवी संघटकमा भएको बृद्धिले श्रमशक्तिको भागलाई सापेक्षिक कमी ल्याइदिन्छ । यद्यपि पुँजी संचय अगाडि बढ्नुका साथै श्रमशक्तिको आपूर्ति अत्यन्त धेरै बढ्न जान्छ । पुँजीवादी उत्पादन प्रविधिहरुको विकास र मेशिनहरुको व्यापक रुपमा अपनाउनाले कैयौं श्रमकार्य यति सरलीकृत हुन गए कि अधिकांश महिलाहरु र बालबालिकाहरु पनि किरायका मजदूरहरुमा सम्मीलित हुन सक्दथे । यसका साथै पुँजी संचयको अवधीमा ठूलो संख्यामा साना माल उत्पादक र साना पुँजीपतिको टाट पल्टिन गयो र आफ्नो श्रमशक्ति विक्रि गर्नकालागि बाध्य हुन गए । ग्रामीण क्षेत्रहरुमा पुँजीवादको विकासले ठूलो संख्यामा किसानहरुलाई पनि कंगाल बनाइ दियो जुन जीवनयापनकालागि कमाउनका निम्ति शहरहरुमा घुइँचो लाग्यो । यी सबै कारणहरुबाट श्रमशक्तिको आपूर्ति अत्यन्त धेरै बढ्न गयो । य
बालकृष्ण मैनाली ज्यको संविधानलाई देशको मार्गदर्शकको रूपमा लिइने गरिन्छ। कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था र त्यो देशको मानवअधिकारको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गरिने प्रयास गरेको छ भनेर जाँच्ने कसी भनेको त्यो देशको संविधान नै हो। कुनै कुरा र विषयको समर्थन र विरोधभन्दा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरूले चाहेको संशोधन जनहितका सवालमा मुखरित छ कि छैन, जनजनको चासोको विषय बन्नु अनिवार्य हुन्छ। कुनै राजनीतिक व्यवसायी वा तिनीहरूलाई परिचालन गर्ने समूह वा शक्तिको रुचिअनुसार संविधान संशोधन हुनुहुँदैन र गरिनुहुन्न, त्यसमा सरोकारवालाहरूले सदैव ध्यान पुर्याउनै पर्दछ। देशले अंगिकार गरेको जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थालाई दृढताका साथ जनतामा स्थापित गर्ने दस्ताबेज भनेको पनि देशले प्राप्त गरेको संविधानअनुसार नै हुन जाने हो। यस अर्थमा संविधानलाई देशको राजनीतिक, आर्थिक, मानवअधिकार लगायत कानुनी शासनको पथप्रदर्शकको रूपमा मान
■ इन्द्रबहादुर बराल नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्रको माउ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले केही साताअघि मात्र प्रथम चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान सम्पन्न गरेको थियो । जननेता बीपी कोइरालाको १०६औँ जन्मदिनको अवसर पारेर गत भदौ २४ गतेदेखि दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान पनि प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसले तमाम काङ्ग्रेसजनमा केही उत्साह नथप्ने कुरै भएन । आफ्ना विचारहरू पोख्न नपाएर त्यसै खुम्चिएका कार्यकर्ताले पेटभरिका पीडा र कुण्ठा ओकल्ने अवसर पनि पाएका छन् । आफ्ना विचार र दृष्टिकोण साथीहरूको बीचमा राख्न पाउँदा कार्यकर्ताको मनोबल उच्च नहुने कुरै भएन । प्रथम चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानको अनुभवले दोस्रो चरणको कार्यक्रमलाई थप परिस्कृत बनाउन सघाएको छ । केन्द्रीय समितिले खटाएका प्रतिनिधिहरू पहिलो चरणभन्दा दोस्रो चरणमा झनै तिखारिएर प्रस्तुत भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । पार्टीले दिएको कार्यादेशको सीमाभित्र बसे
उरास लोहोरुङ् राई मेरो छिमेकमा एउटाको नाम दिलबहादुर छ, तर ऊ दैनिक रक्सी पिएर आफ्ना छोराछोरी र श्रीमतीलाई सताउने काम गर्छ । म कहिलेकाहीं उनको छोराछोरीलाई तिम्रो बुवाको नाम कति राम्रो छ है भन्छु । जवाफमा उनीहरूले नाम अनुसारको काम वा व्यवहार भइदिएको भए हामी यो अवस्थामा हुने नै थिएनौं । हामीलाई हाम्रो ड्याडीको नाम होइन, तर उहाँको काम वा व्यवहार चाहिएको छ, दाई, भन्छन् । अनि त्यो दिलबहादुर र उसको परिवारले मेरो देशको वर्तमान अवस्थालाई हुबहु प्रतिनिधित्व गरेको देख्दा मन कटक्क खान्छ । हाम्रो देश नेपाल राणा, राजा, पञ्चायत, प्रजातन्त्र हुँदै सबैको प्यारो नाम ‘लोकतन्त्र’ सम्म आईपुगेको छ । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय राज्य व्यवस्थाको अभ्यास गरेको पनि एक दशक नाघिसकेको छ । जनताहरूको ठूलो बलिदानबाट प्राप्त गरिएको यो लोकतन्त्र आफैमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो भन्ने कुरामा दुइमत छैन । अब एक दशक भन्द
■ देवप्रकाश त्रिपाठी नेपाल कहिलेदेखि ‘एजेन्ट’हरूको दबाब र प्रभावमा परेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धानपछि मात्र दिन सकिन्छ । तर, चन्द्रशेखर दाहाल (उपाध्याय) देखि प्रचण्ड (दाहाल)सम्म आइपुग्दा नेपालमा विदेशी ‘एजेन्ट’हरूको भूमिका सूक्ष्म, तर व्यापक देखिन्छ । राणाहरूको १०४ वर्ष लामो शासन जसलाई कुनै पनि प्रजातन्त्रवादीले समर्थन गर्न सक्दैन, राष्ट्रियताका दृष्टिले राणाशासनसमेत नेपालको इतिहासमा पञ्चायतकालजस्तै उच्च कोटिको मानिन्छ । पञ्चायतमा प्रजातन्त्र थिएन, तर प्रजातन्त्रबाहेक एउटा राज्यमा हुनुपर्ने अनेकौँ सकारात्मक गुण थिए । चन्द्रशेखर दाहाल राज्यले पत्याएका, भरोसा गर्न सकिने व्यक्ति थिए, भरोसा नभएका भए गजराज मिश्रसँगै टोलीमा राखेर ब्रिटिससँग सन्धि गर्नका निम्ति सायद सुगौली पठाइने थिएनन् । तर, केही बिघा जमिन (भनिन्छ २२ सय बिघा), केही नगद र जिल्लाको एउटा ‘मजिस्टे«ट’ नाम